यसरी भयो फेसबुकबाट मोहभङ्ग ! - शखदा साहित्य
यसरी भयो फेसबुकबाट मोहभङ्ग !
2:24 AM संस्मरण
समयको गतिले अहिलेको समाजलाई आधुनिकबाट उत्तरआधुनिक बनाइसकेको छ । धेरै वर्षअघि हाते पुस्तक निक्लेको अवस्थामा छापाखानाको आविष्कारले समाजमा ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको थियो । समाज पूर्व आधुनिकयुगबाट आधुनिक बनेको थियो । अहिले संचारक्षेत्रमा भएको ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तनमा डिजिटल प्रविधिले फेसवुक, ट्वीटर र अनेकौँ अरू सञ्जालद्वारा मानिसको जीवनमा ठूलो परिवर्तनकारी भूमिका खेलिरहेको छ । अहिले नेपाली साहित्यको ठूलो समूह फेसवुकमा आकर्षित छन् । तुरुन्त सिर्जना गर्ने पोस्ट गर्ने अनि प्रतिक्रिया पाइहालिने भएर धेरै सर्जकलाई फेसवुकले आफूतिर तानेर मोहित पारेको छ । यसरी सबै मोहित भएको ठाउँ म मोहित नहुने कुनै प्रश्न नै रहँदैन । विगत दुईवर्षदेखि डिजिटलीय संसारले मलाई मेरो लेखनकार्य ठूलो मद्दत गरेको छ । घरबसीबसी ब्लग संचालन गरेर म देश र विदेशका धेरै पाठकहरूको घरभित्र मात्र नभई मनमा पस्न सफल भएको छु । त्यस्तै मेलबाट सबै काम गर्ने हुँदा मेरो ठूलो साधन र स्रोत बचत हुने गर्दछ । अझ फेसबुकमा सक्रिय रूपले लाग्न थालेपछि धेरै पाठकसँग म अन्तरङ्ग सम्बन्ध राख्न सफल भएको थिएँ । तुरुन्त पाइने अन्र्तक्रियाबाट म निकै प्रभावित भएको थिएँ । मान्छे सधैँ प्रशंसाको भोको हुँदोरहेछ । यही प्रशंसाको तृष्णाले मैले आफ्नो बहुमुल्य समय फेसबुकमा बिताएको थाहै हुँदैन्थ्यो । कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो मलाई फेसबुकको नशा नै लागेको छ । अब कसरी हटाउने होला ? म उपाय पनि खोज्ने प्रयास गर्दथे । तर नशाको अगाडि सबै उपाय बालुवामा पानी हालेझै हुँदोरहेछ । बेलाबेलामा म फेसबुकसम्बन्धी खराव कुराहरू सञ्चारमाध्यमका छापाहरूमा पढदथेँ तर म वेवास्ता गर्दथे । मेरो अरु खरावी केके होलान् म भन्न सक्दिनँ तर एउटा खरावीचाहिँ यो छ कि कुनै पनि कुरा गर्दा म त्यस्मा एडिकजस्तै नै भएर लाग्छु । चाहे त्यो जुनसुकै कार्य होस् । त्यसैले फेसबुकको नशामा पनि हरसमय लट्ठिने गर्दथे । वास्तवमा समय चेतनाका भोगाइहरू नै मानव जीवनका गुरुमन्त्र हुँदा रहेछन् । फेसबुकसम्बन्धी आफैसँग भएको यो घटनाले मलाई रक्सी खाएर नशाले छोडेझैँ भयो । मलाई बिहोशीबाट होश फिरेझैँ भयो । अघिसम्म त म अन्धो नै भएर लागेको रहेछु । फेसवुकको नशाले छोडेपछि मैले यसमा खरावी नै खरावी देख्न थाले । हुन त यो बिज्ञानले सञ्चारक्षेत्रमा गरेको विकासको शक्तिशाली फटका हो । तर बिज्ञानले आणविक वम बनाएर मानवको हितको कार्य ग¥यो की विनाशको ? यो छलफलको ठूलो विषय हुनसक्छ । तर विज्ञानलाई मानवीय विवेकले माखेसाङ्लोमा पार्न सकेन भने त्यो मानवको लागि ठूलो अभिशाप सावित हुनसक्छ । मैल फेसबुकलाई पनि विज्ञानले अविष्कार गरेको आणविक वम सरह ठानेँ । आणविक वमको प्रयोगमा अलिकति तलमाथि भयो भने यसले संसार ध्वस्त पार्न सक्छ । त्यस्तै यही फेसवुकको प्रयोग गलत ढङ्गले हुन थाल्यो भने यसले समाजमा विकृति र विसंगतिको ठूलो विकिरण फैलाइ समाजलाई पतनको ठूलो खाडलमा पु¥याउन सक्छ । यो कुरा मैले भविष्यको लागि अहिले गरेका वाणि हुनसक्छ । जब मैले यो कुरा पत्ता लगाए त्यसपछि फेसबुकलाई कहिलेकाहीँ ससुराली जाने जुवाईको घरजस्तो बनाएर राखेँ । सायद यो घटना नघटेको भए फेसवुकको नशाले म आफनो अति बहुमुल्य समयको दुरूपयोग गरिरहेको हुन्थे । तर ईश्वरको कृपा भनौ वा समयको परमकृपाले म यो सानो घटनाले ठूलो पतनको खाडलबाट म जोगिएँ । खासमा घटना यस प्रकारको थियो ।
फेसबुकमा पेन लभर्स ग्रुप निकै चर्चामा थियो भनौ छ । किशोर पहाडीले यसमा नयाँनयाँ समाचार राखिदिने भएकाले यो साहित्यिक क्षेत्रमा उपयोगी र चर्चित भएको थियो । फेसबुकको कथाकुनोमा एउटा घटना घटेपछि म उत्तिसारो कुनै पनि ग्रुपमा पोस्ट गर्ने र कमेन्ट गर्न छोडेको थिए । विना सन्दर्भ हरिकृष्ण डगोल भन्नेले मेरो साहित्यलाई खतम साहित्य भनेर लेखेका थिएँ । अहिले किशोर पहाडीको यो गु्रपमा निकै ज्ञानवद्र्धक सूचना र वौद्धिक जमात देखेपछि यसमा म निकै आर्कषित भएको थिएँ ।
संंविधान सभाको म्याद सकनालागेको तर संविधान नबनेको अवस्थामा यससम्बन्धी विषयमा नयाँनयाँ कुरा फेसबुकमा आउन थालेका थिए । त्यही सन्दर्भ राखेर मैले एउटा अपहरण र हत्यासम्बन्धी कथा गरिमामा आउँदै गरेको र संविधान सभासम्बन्धी कुनै संवेदनशील कथा लेख्दैछु भनेर पाठकलाई जानकारी दिएर पोष्ट गरेको थिएँ । एकजना कपिल सिवाकोटी ले जसले अरू साहित्यकाहरूलाई व्यक्तिगत गालीगलौज गरेर नभएका आरोपहरू लगाएर कमेन्ट लेखेका थिए । उसले मलाई पनि आत्मप्रचार गर्ने र मेरो लेखन गरूप्रसाद मैनालीको पाराको भनेर कमेन्ट गयो । मलाई लाग्थ्यो म जस्तो सुकै आलोचना पनि सहनसक्छु तर होइन रहेछ कस्ताकस्ता वरिष्ट साहित्यकारहरू आलोचनाको ‘आऽ’ सुन्न नसक्ने परिवेशमा म त बालक ववुरो न परेँ । किन हो त्यो आलोचना मेरो आलोच्य पाचनप्रणालीमा अलिक बढी गुणस्तर भएको प्राटिनझँै साबित भयो । अहँ त्यो आलोचना मलाइ पटक्कै पचेन । अनि मैले मेरो अपाच्य आहारालाई फेसबुकमा यसरी छरेँ —‘कपिलजी तपाईले मलाई आत्मप्रचार भनेर जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कहाँ, कसरी गरे त्यो बताउनुहोला । मैले त्यही आत्मप्रचार हुन्छ भनेर झन्डै एक दर्जन पुस्तक निस्कदा पनि काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रम गरेको छुइनँ । यदि मैले चाहने हो भने हजारौँ रूपैयाँ खर्च पत्रिका आत्मप्रचार गराउन सक्थे । तर म यो पटक्क चाहन्न । मैले केही गरेको नै छैन मैले अझै धेरै लेख्नुछ । अझ मेरो राइटिङ्गको विषयमा एक जना हरिकृष्ण डगोल भन्ने साथीले झुर छ भनेर लेख्नुभएको थियो । पछि त्यसलाई पाठकहरूले कसरी खण्डन गरेँ त्यो पनि यो लिकमा छ पढनुहोला मैले यति भनेर टिप्पणी पठाए ।
यो हरिकृष्ण डगोलको घटना कथाकुनोमा घटेको थियो । त्यो कुनोमा हरिकृष्ण भन्ने मान्छेले मेरो राइटिङ्ग झुर भएको भनी लेखिपठाएको थियो । मलाई यो कुरा चित्त बुझेन र पाठकहरूले साँच्चै के भन्नुहुन्छ भनी यो लिक स्टाटसमा सेयर गरेको थिएँ । पछि त्यसमा यति धेरै पाठकले मप्रति स्नेह जगाउनुभयो । अनि मात्र मलाई थाहा भयो वास्तवमा पाठकले मलाई कतिको रुचाउनुहुँदो रहेछ भनेर । सायद मलाई पाठकको त्यही हार्दिकताले भरिएको शुभेच्छुक शब्दले लेखनमा उर्जा दिइँरहेको छ । मैले यही लिक उक्त कपिल भन्ने व्यक्तिलाई सेयर गरेको थिएँ । उक्त व्यक्ति सहमतिमा आयो । तर पछि अनुपमा निर्झर र राममणि थापा र महेन्द्र भन्नेले मलाई यस्तै अनेकौँ आरोप लेखेर टिप्पणी गरेँ । उनीहरूलाई पनि मैले मेरो बलबुताले भ्याएसम्म आफ्नो स्पष्टिकरण दिएँ । अझ भनूँ उनीहरूले गर्दा अहिले मैले आत्मप्रचार गर्न पाएको थिएँ । मैले उनीहरूलाई धन्यवाद दिएँ तर यी सब गरुञ्जेल मेरो धेरैसमय खेर गइरहेको थियो भने अर्कोतिर म तनावमा रहिरहेँ । दिनभर जसो म तनावमा रहेँ । अन्तमा मैले त्यो पोस्ट नै डिलिट गरिदिएँ । कपिल, अनुपम र राममणी र महेन्द्र भन्ने व्यक्तिको लिक नै व्लग गरिदिएँ । पछि उनीहरूले के लेखे मैले थाहा पाइनँ । किशोर पहाडीले कसरी स्पष्टिकरण दिनुभयो थाहा पाइनँ । पछि मलाई एउटा नमीठो वितृष्णा फेसबुकप्रति उब्जियो । मैले ती मित्रहरूको प्रोफाइल हेरेँ । त्यहाँ कुनै परिचय थिएन । यो भीडमा ढुगाहान्ने प्रतिगामी तत्वको लागि मैले दिनभरको समय बेकारमा बर्बाद गरे जस्तो लाग्यो । मलाई भट्टीको आगोले जलाएझैँ जलाइरह्यो । मलाई ठूलो निन्द्राबाट ब्युझेजस्तो भयो । म आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यबाट धेरै टाढा पुगेझँै लाग्यो । मलाई लाग्यो अब मबाट यो गल्ती हुनुहुँदैन । सायद यो घटना नघटेको भए म यो भ्रमबाट मुक्ति पाउँदिनथे हुलाँ । फेसबुकमा राम्रैराम्रो मात्र देख्ने मेरो भ्रम टुटेर अहिले नराम्रै नराम्रो देख्न थाल्यो । म फेसबुकवारे मनोबिश्लेषण गर्न पुगेँ । वास्तवमा फेसबुक एउटै जात, स्तर, सोचाइ, प्रवृत्ति र स्वभाव भएको मानिसको सञ्जाल होइन । यो हजारौँ किसिमका मानिसहरूको सञ्चालको हातेसाङ्गलो हो । यसमा अपराधिक मनोवृत्ति जगाउने एउटा ठूलो स्थल पनि हुनसक्छ जहाँ मानिसहरू लुकेर अरुलाई हिलो छ्याप्ने र ढुगा हान्ने काम गर्न सक्छन् । यहाँ जसको चरित्र सफा छ, सेतो वस्त्रमा हुन्छ र हिलो छ्याप्नेलाई सेतो वस्त्र लगाएको मानिसनै चाहिएको हुन्छ । यहाँ मानिसहरूलाई हतोत्साही र आत्मबल गिराउने अनेकौ खेल हुन सक्छन् । फेसबुकबाट गरिएका विभिन्न अपराधिक कार्यहरू अहिले मेरो मस्तिष्कमा पलेशवैक भयो । त्यही फेसवुकमा कुनै साथीको सयौ कमेन्ट आउने तर आफनो एउटा पनि कमेन्ट नआउने युजरहरू कुण्ठित मनोवृत्ति पालेर बसेका हुनसक्छन् । हामी आफ्ना सिर्जना र लिंकहरू सेयर गर्छौ यो अर्थमा कि सबैले पढुन, र सके राम्रा कमेन्ट गरुन् भनेर तर यसमा हजारौ व्यक्ति सिधै कमेन्ट गर्न सक्ने हुनाले कुण्ठित मन हुनेले अनेकौँ निराधार आरोप र गाली गलौज पनि गर्न सक्छन् । यो डिजिटल संसारको मायवी चालमा जे सुकै र जस्तो सुकै घटना पनि घटन सक्छन् । म एकपल्ट यस्तै मायवी संसारको जालमा प्रशंसाको धुरीमा पुगेर यथार्थको धरातलमा पछारिन पुगेको छु । जीवनको तृप्त÷अतृप्त सम्पृक्त भोगाइ । जीवन घटनैघटनाको शृंखला रहेछ । जुन विस्मृत भोगाइमा उभिएर जीवनले नयाँनयाँ कथाको पर्खाल खडा गर्दोरहेछ । त्यो च्याटिङ्गको घटना थियो । त्यसपछि म च्याटिङ्गमा बस्न छोडेको थिएँ । बसीहाले भने पनि काम विशेषले मात्र बस्ने गर्दछु । अहिले यो फेसबुकको घटनाले मेरो मस्तिष्कमा फेसबुकविरुद्ध नयाँ सफ्टवेयर तयार गरेर इन्सटल्ड गरिदियो । त्यो सफटवेयरले मभित्र काम गर्न थाल्यो । यो घटना कसैलाई सानो जस्तो लाग्ला तर यसको रूप भयंकर पनि हुन सक्छ र यो घटना मेरो मात्र नभई मजस्ता धेरै पात्रको हुनसक्छ ।
अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु यो डिजिटल संसार यस्तो एउटा संसार रहेछ जसलाई हामी पानीभित्रको छायाँ भन्न सक्छौ । त्यो देखिएको छायाँ कुनै पनि बेला हराउन सक्छ त्यो भ्रम हुन पनि सक्छ र यथार्थ पनि अथार्त दुवै पनि । यति हुँदाहुँदै पनि संचारक्षेत्रले तीव्ररूपमा विकास गरेको यो फेसबुक सञ्जालसँग हामी नाता तोडन सक्दैनौँ । तर त्यो नाता फेसबुकले हामीलाई लगाउने होइन हामीले फेसकुकलाई लगाउनुपर्छ र त्यो नाता जुनसुकै बेला पनि तोडन सक्ने हुनुपर्दछ ।
यो लेख लेखेर सर्वप्रथम मैले फेसवुकको नोटमा प्रकाशित गरेको थिएँ । मलाई लाग्थ्यो म फेसवुकको नशाबाट टाढा पुगिसकेको छु । तर अहिले फेरि नोटमा राखेपछि के र कस्ता किसिममा कमेन्ट आए भनेर हेर्न म लालयित थियो । फेरि म फेसवुकमा नै झुन्डिन थालेँ । यो लेखमा धेरे कमेन्ट आयो । यहाँ फेरि कपिलजस्ता युजर पनि भेटिए तर अहिले म पहिलाको जस्तो संवेदनशील हुन छोडिसकेको थिएँ । त्यहाँ आएका कमेन्ट मध्ये भोजराज वराल भन्ने युजरको कमेन्ट निकै राम्रो र सबैले मनन गर्नुपर्ने खालको थियो त्यो यसप्रकारको थियो —
कम्प्युटर तथा सूचना प्रबिधि अध्ययन र अध्यापन गरेको अनुभव लाई मध्य नजर राखेर भन्नु पर्दा म यसो भन्छु—
१) फेसबुक लगायत का अन्य सामाजिक सञ्जाल मा नचिनेको व्यक्ति वा प्रोफाइल पढ्दा शंका लाग्ने व्यक्तिलाई साथी नबनाउनुस् जो पायो उसैलाई साथी बनाएर बढी हानि हुन सक्छ । साथी बनाइसकेपछि पनि विचारहरू मिल्न छोडे भने उनीहरूलाई साथी बाट हटाउनुस, दुःख नै दिए भने मात्र ूप्रतिबन्ध लगाई दिनुस ।
२) आफ्नो फोटो राखेपछि अरुले त्यसलाई निकालेर राम्रो वा नराम्रो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्छन तसर्थ हुनसक्ने परिणामलाई सोचेर मात्र तस्बिरहरू राख्नुस् । हुनसक्ने परिणाम तपाईले सोचेभन्दा हानिकारक जस्तै अश्लिल प्रयोजन, अरूको शरीरसंग मिलाई दिने इत्यादि हुन सक्छन् ।
३) अरूको फोटो राख्नु हुन्छ भने उनीहरूको अनुमति लिएर मात्र राख्नुस् नत्र कानूनी फन्दामा पनि पर्न सक्नु हुनेछ ।
४) कसैले लेखेका कुरा पत्याउनै पर्ने हुँदैन । ती कुराहरू मनगढ़ंते हुन सक्छन् किनकी तिनलाई दोस्रो व्यक्तिले कडाइका साथ पुनर्विचार गरेको नहुन दरो सम्भावना हुन्छ ।
५) आफ्नो काम छोडेर यस्ता संजालमा नलाग्नुस, सकेसम्म अन्य केही काम नपाएर बोर भएको बेला बिरामी पर्दा इत्यादि मात्र चलाउनुस नत्र लत लाग्न सक्छ अनि हात र औंला तथा शरीरका अन्य अङ्गहरू दुख्न सक्छन् ।
६) मनमा लागेका सबै कुरा उदांग नपार्नुस् । यसले सम्बन्ध, नाता, जागिर र सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत नोक्सानी पु¥याउन सक्छ ।
७) अरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिंदैमा उत्तेजित नहुनुस, किनकी सो समुद्रमा एक थोपा हुन सक्छ, अरू धेरैले मन नपराए पनि राम्रै प्रतिक्रिया दिन सक्छन । अनि अरूले नराम्रो प्रतिक्रिया दिए भन्दैमा चित्त नदुखाउनुहोस् दिने व्यक्तिमा राम्रो संग सोच्ने शक्ति नहुन सक्छ, वा लेख्ने बेला उ राम्रो मूड़मा नहुन सक्छ । प्रतिक्रिया आउँदै आएन भने पनि चित्त नदुखाउनुहोस् । अरूको फुर्सद नभएको बेला पर्न सक्छ वा उनीहरूलाई खबर गरेको समाचार जंकू फोल्डरमा पर्न सक्छ।
८) सबै भन्दा ठुलो कुरो सधै सजग रहनुहोस् किनकी त्यहाँ लेखिएका तपाईका विचारले अरूलाई पनि उत्तिकै मनोबैज्ञानिक क्षति वा लाभ पु¥याउन सक्छ अनि सो का परिणाम सम्हाल्नै नसकिने पनि हुन जान सक्छन् ।
९) च्याट गर्दा पनि बिचार पु¥याउनहोुस्, अरूको मूड़, तपाईंको मूड़ र समयको तारतम्य परेन भने झगडा हुनसक्छ ।
१०) सकेसम्म बिषयवस्तु, प्रतिक्रिया र लेखाइ आफ्ना आँखाले मात्र नहेर्नुहोस्, सबै कुरो अरूको आँखाबाट पनि हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
११) सोचाइ सकेसम्म फराकिल्ऽो पार्नुहोस्, तर त्यहाँ किुञ्चित संकुचित सोचाइ भएकाहरूको पनि भिड छ भन्ने कुरा नभुल्नुहोस् ।
१२) यस्ता संजाल बाट अपराध निरन्तर भै रहेको हुन्छ भन्ने कुरा नभुल्नुहोस् र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सकेसम्म अनावश्यक गरि नफुस्काउनुहोस् ।
१३ सबै भन्दा ठुलो कुरा तपार्इँले नकिने को चिट्ठा प¥र्यो भनेर कसैले भन्यो भने नपत्याउनुहोस्, किनकि किनेकै चिट्ठा पनि परेको खण्डमा तपाईंले नमागेसम्म सो संस्थानले दिन चाहदैन ।
१४) यी सबै कुरा मध्ये नजर गरेर प्रयोग गरेको खण्डमा फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जाल्ऽ का प्रविधिहरू वरदान सिद्ध हुनेछन तर ढङ्ग नजानेमा यी सबैले दुर्दशा निम्त्याउँछन्। ।
सबैको शुभ होस् भन्दैमा भगवान वा भन्ने मान्छेले पु¥याई दिने होइन, हुने कुरो तपाईंको आफ्नै हातमा भर पर्छ ( तर शुभ होस् त भन्नै प¥यो )